🚴‍♀️ Baaskiil | Booqo Hultsfred
Waad salaaman tihiin baaskiilka cagaaran!
Ku dagdagida mootada wadooyinka quruuruxda aamusan waa wax aad u qaas ah. Saqafku wuxuu ku tuntay wadooyinkiisa yar yar ee taraafikada yar yahay. Halkaan waxaad ku wareegi kartaa baaskiil oo aad sugi kartaa 17 km oo leh dabeecado iyo khibrado kala duwan. Haddii aad doorbideyso xawaare iyo adrenaline oo aad rabto inaad dareento xanaaqa calooshaada, markaa Dackestupet ayaa adiga kugu habboon! Ama maxaa diidaya inaad duudduubto dambiisha oo aad u qaadatid qoyska oo dhan halxirasho adigoo u maraya kaymo qoto dheer oo ku lebisan dharka.
Ku wareeg lebbiska jidka cidhiidhiga ah ee Flaten ilaa Gårdveda
Ku wareeji labiska wadada cidhiidhiga ah ee Hultsfred ilaa Målilla
Halis ayaa sugeysa hareeraha geeska! Haddii aad rabto inaad u dhawaato xitaa tareenka cabira, si aad u barato waddo tareen oo kasta oo runtii ku raaxeyso dabeecadda, waxaa jira fursad
Xidhitaanka Baaskiilka wadada cidhiidhiga ah ee Virserum ilaa Åseda
Dharka Baaskiilka ee wadada cidhiidhsan Virserum ilaa Åseda. Agagaarka idaacada Virserum waxaa ku yaal jawi nostalgia ah oo bixiya safar waqti hore ah Gaarsiinta dharka daaqadda tigidhada, ballansashada hore